3- arrimood oo abuuray, cabsida Deni iyo Madoobe ay ka qabaan in Farmaajo ay la fadhiistaan . - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/3- arrimood oo abuuray, cabsida Deni iyo Madoobe ay ka qabaan in Farmaajo ay la fadhiistaan .
Muddo laba maalin ah, ayaan wax faahfaahin ah oo laysku halayn karaa kasoo bixin shirkii saddex geesoodka ahaa ee u dheexyay Farmaajo, Deni iyo Axmad madoobo oo lagu ballansanayaa in uu Muqdisho ka furmo habeenkii Arbacada ee khamiistu ay soo gelaysay.
Shirka,ayaa noqday mid aad loo kala maaganyahay oo aan sifudud laysu horfadhiisan Karin. Maxaa yeelay, waa shir u dhexeyaal saddex oo labadii sano ee u dameeyay ay dhextaalay dagaal siyaasadeed oo aan waxba layskula hadhin.
Modoobe iyo Deni, ayaa muddooyinkii udambeeyay ahaa rag aad u kala fogaaday Farmaajo. Taasina waxay sabab u tahay is aaminaad darro ka dhexay saddexda dhinac.
Madoobe, waa madaxwayne boobay doorashadii Jubbaland oo aan sharci ahayn sida uu aaminsanyahay Farmaajo, waxaan uu madaxwayne Farmaajo dhawr jeer isku deyay in uu meesha ka tuuro isaga oo adeegsanaya taliyaha Nabada Sugidda Soomaaliya oo isna qorsheeyay inqilaab ay ciidamada Jubbaland meesha kaga tuuraan Axmad Modoobe.
Geesta Kale, madaxwaynaha Puntland, ayaa ka cabanaya cuna qabatayn dhaqaale oo Farmaajo uu saaray dawladdiisa, mararka qaarna isku deyay in meesha uu katuuro, isaga oo isku deyay in uu u edeegsado baarlamanka Puntland iyo xataa dadka shacabka ah.
Arrimahaas oo kuwa kale, ayaa sabab u noqday in shirkii noqdo mid aan hore loogu dhiirran in lays hor fadhiisto.
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Talyaaniga oo cusbitaal la dhigay.
DF oo soo dhaweysay dadaallada Kuweyd iyo Mareykanka ee Khaliijka